Vatungamiri veMapato Muhurumende Voti VaChinamasa Vaturure Mapepa avakaisa kuMatare
Vatungamiri vemapato ari muhurumende vanoti VaPatrick Chinamasa vanofanirwa kutora mapepa avakaisa sezvo vakaita zano ndega
HARARE, WASHINGTON — Vatungamiri vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa vabvumirana kuti gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, vabvise mapepa avakasvitsa kudare neMuvhuro vachikumbira kuti sarudzo dziitwe musi 14 Nyamavhuvhu.
Izvi zvinotevera kugunun’una kwaitwa nemapoka maviri eMDC ari muhurumende kuti VaChinamasa vakaita izvi vasina kubvumirana sezvakawiriranwa kumusangano weSADC.
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende uye vari mutungamiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, pamwe naVaWelshman Ncube vanove mutungamiri weMDC diki, vaita musangano paState House wekuzeya chikumbiro chakasvitswa kudare repamusoro-soro neMuvhuro chekuti sarudzo dziitwe musi wa 14 Nyamavhuvhu.
VaMugabe vakange vatara kuti sarudzo idzi dziitwe musi 31 Chikunguru asi musangano wevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADC wakaitirwa kuguta guru reMozambique reMaputo neMugovera wakabvumirana kuti mapato matatu ari muhurumende awirirane kuti sarudzo idzi dzoitwa riinhi, oenda kudare kunokumbira kuti dziitwe muzuva raanenge awirirana.
Zvisinei, VaChinamasa vanonzi vakaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa vachiti vatumwa naVaMugabe ndokusvitsa mapepa kudare vachikumbira kuti sarudzo idzi dzipfuudzirwe mberi kuti dzigozoitwa musi 14 Nyamavhuvhu.
Mutauriri waTsvangirai, VaLuke Tamborinyoka, vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti vatungamiri vemapato ari muhurumende vabvumirana kuti VaChinamasa vabvise mapepa avakaisa kudare kuti agadziriswe paine kuwirirana pakati pemapato ari muhurumende.
Mutauriri weMDC yaVaTsvangirai, VaDouglas Mwonzora, vatiwo manyorerwo anga aitwa mapepa naVaChinamasa anga ari ekuti dare rigorasa chikumbiro chavo kuitira kuti sarudzo dziitwe musi wa 31 Chikunguru sezvakanga zvazviviswa naVaMugabe musangano weSADC usati waitwa neMugovera wapfuura.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano ravanachipangamazano reZimbabwe Democracy Institute, VaPedzisai Ruhanya, vati zvakaitwa naVaMugabe naVaChinamasa izvi kushora mamwe mapato ari muhurumende pamwe neSADC.
SADC yakati vari muhurumende vagadzirise zvese zviri kunetsa zvinosanganisira misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika inobata kuvandudzwa kwemashandiro emakambani enhau pamwe nekutevedzerwa kwemitemo yenyika kuitira kuti munyika mugoitwa sarudzo dzakachena.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika yataura yakazvimira inoti kunyange hazvo vatungamiri vemapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa vabvumirana kuti VaChinamasa vabvise mapepa avakaisa kudare neMuvhuro, hayioni paine zvikuru zvichaitika. sezvo nguva zhinji VaMugabe vachizoonekwa vachisiya zvavanenge vawirirana nevamwe vavo.
Muzvare Gladys Hlatshwayo vati nguva zhinji VaMugabe vanozoonekwa vachisiya zvavanenge vawirirana nevamwe vavo muhurumende yemubatanidzwa.
"Ndinoona sokuti VaChinamasa pavakaenda kuma court havana kungoenda vachiita zvinhu zvavo chete, asi kuti vakanga vatotaurirwa na principal wavo vanova VaMugabe," vadaro Muzvare Hlatshwayo.